यो गीतले आँसु मात्र आँउदैन,नेपालको समाजको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ, यो बर्षको उत्कृष्ट तीज गीत पापिनी बुहारी » लोक संगीत पारखी
नेपाली महिलाहरुको महान पर्व हरितालीका तीज आउन अब केहि समय मात्र बाँकी छ । यसै अवसरमा कलाकाहरुले नयाँ/नयाँ तीज गीहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन । विगतको तुलनामा यो बर्ष गीत धेरै कम सार्वजनिक भएका छन भने विकृति र विसंगती पनि निकै घटेको छ ।
तीजकै अवसरमा भर्खर मात्र नयाँ तीज गीत पापीनी बुहारी भर्खर मात्र सार्वजनिक भएको छ । यो बर्ष सार्वजनिक भएको उत्कृष्ट तीजको सूचीमा यो गीत पनि एक हो भन्दा अतियुक्ति नहोला । तपाई हाम्रो समाजमा धेरैको घरमा घटिरहेका कथालाई गीतले निकै कलात्मक रुपमा गीत मार्फत प्रस्तुत गरेका छन ।
सतिश अधिकारीको उत्कृष्ट शब्द तथा सुरेश रमण अधिकारीको सुमधुर लय सिर्जनामा तयार पारिएको सो गीतको खोट लगाउने ठाँउनै छैन । गीतमा खुमन अधिकारी,शर्मिला Gurung,सुरेश रमण अधिकारी,सन्ध्या परियारको आवाज रहेको छ ।
गीतको म्युजिक भिडियो समेत निकै उत्कृष्ट रहेको छ । गीतमा शिव विकले निर्देशन कला प्रस्तुत गरेका छन भने दाह्री वा,रमा थपलिया,केशव सापकोटा र विम्लीको अभिनय रहेको छ ।
गीतलाई एस थ्री केले बजार ब्यवस्थापन गरेको छ । आउनुहोस गीतको सफलताको कामना सहित सो गीतको पुरै म्युजिक भिडियो यहाँहरुको लागी । मन परे शेयर गर्नुहोला ।
के साच्चै बन्दै छनत जुना श्रीस को दुलाह राजा मेक्सम खाती क्षेत्री…(हेर्नुहोस भिडियो सहित)
विवाह खर्च कटाएर विद्यालयलाई सहयोग गर्ने दम्पती सम्मानित
“ए हैँजा, नर्क तिर लैजा”, पशुपति शर्माको यो गीत कतीले सुन्नु भयो?( भिडियो)
पहिलो पटक १ लाख लिएर बिष्णु माझीले गाएको गीत बाहिरियो !यस्तो बन्यो भिडियोनै (निन्द्राको ओखती)
दिलिपकी छोरी चलचित्र ‘लक्का जवान’मा डेब्यु गर्दै ?
आइफामा सरकारी लगानीविरुद्ध विरोध प्रदर्शन,चौतर्फी बिरोध सुरु